မန်စီးတီး ရဲ့ ရလဒ်တွေကို စိတ်မ၀င်စားပဲ ဘာစီလိုနာနဲ့ပွဲကိုပဲ အာရုံအပြည့်စိုက်ထားတယ်လို့ ကလော့ပ် ပြောကြား – News
April 29, 2019 April 29, 2019 AuthorLeaveaComment on မန်စီးတီး ရဲ့ ရလဒ်တွေကို စိတ်မ၀င်စားပဲ ဘာစီလိုနာနဲ့ပွဲကိုပဲ အာရုံအပြည့်စိုက်ထားတယ်လို့ ကလော့ပ် ပြောကြား
လီဗာပူးနည်းပြ ကလော့ပ်က သူ့အနေနဲ့ ပြည်တွင်းလိဂ်မှာ မန်စီးတီးအသင်း ဘယ်လိုပင် ရလဒ်တွေ ရနေပါ စေ စိတ်မ၀င်စားပဲ လာမယ့် ကြားရက်မှာကစားရမယ့် ဘာစီလိုနာနဲ့ပွဲကိုပဲ အာရုံအပြည့်စိုက်ထားတယ်လို့ ပြောခဲ့ ကြောင်း 90 MINက ဖော်ပြလာပါတယ်။ “မန်စီးတီး ခြေချော်မှာကို ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ စိတ်ဝင်စားနေသင့်တာလဲ.? ဒီအရာက စဉ်းစားစရာကိုမလိုတာ ပါ၊ ကျွန်တော်တို့ စွမ်းဆောင်ထား တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ ပျော်ရွှင်နေပါတယ်၊လာမယ့်ပွဲကို အကောင်းဆုံး ကစားနိုင် ဖို့ အာရုံစိုက်မယ်၊ဒါပါပဲ၊ ကျွန်တော်တို့မှာ လက်ကျန် ၂ ပွဲ အဖြစ် နယူး၊၀ုလ်တို့နဲ့ ကစားရပါမယ်၊ အရမ်းခက်မယ့် ပွဲတွေ ဖြစ်လာမှာပါ၊ ဒါက ကျွန်တော်တို့ သမိုင်းဖြစ်လာမှာပါ၊မန်စီးတီးကို စောင့် ကြည့်နေဖို့ မလိုပါဘူး။” လို့ ကလော့ပ်က Express ကို ပြောသွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လက်ရှိမှာ လီဗာပူးနဲ့ ဘာစီလိုနာ ၂ သင်းထဲက တစ်သင်းက ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲ တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ရင် ချန်ပီယံ ဖြစ်ဖို့ ဦးစားပေး သတ် မှတ် ခံထားရတဲ့ အသင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူး နည်းပြ ကလော့ပ်ကတော့ ယခင် ဒေါ့မွန်မှာ နေခဲ့စဉ်ကတည်းက ဥရောပနဲ့ ပြည်တွင်း လိဂ်ပြိုင်ပွဲတွေ မှာ အမြဲတမ်း ဒုတိယနေရာနဲ့သာ ကျေနပ်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာတော့ မန်စီးတီးနည်းပြ ဂွါဒီယိုလာက ကလော့ပ် ရဲ့ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးကို ဂရုစိုက်သွားမှာ မ ဟုတ်ဘူးလို့လည်း ပြောထားတာ ရှိပါတယ်။လီဗာပူးနဲ့ မန်စီးတီးတို့က ပြည်တွင်းလိဂ်မှာ ရမှတ် ၁ မှတ်သာ ကွာဟနေတဲ့ အနေအထားမှာ မန်စီးတီးက အဆင့် ၁နေရာကနေ ဦးဆောင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လီဗာပူးနညျးပွ ကလော့ပျက သူ့အနနေဲ့ ပွညျတှငျးလိဂျမှာ မနျစီးတီးအသငျး ဘယျလိုပငျ ရလဒျတှေ ရနပေါ စေ စိတျမဝငျစားပဲ လာမယျ့ ကွားရကျမှာကစားရမယျ့ ဘာစီလိုနာနဲ့ပှဲကိုပဲ အာရုံအပွညျ့စိုကျထားတယျလို့ ပွောခဲ့ ကွောငျး 90 MINက ဖျောပွလာပါတယျ။ “မနျစီးတီး ခွခြေျောမှာကို ကြှနျတျောတို့ကဘာလို့ စိတျဝငျစားနသေငျ့တာလဲ.? ဒီအရာက စဉျးစားစရာကိုမလိုတာ ပါ၊ ကြှနျတျောတို့ စှမျးဆောငျထား တာနဲ့ကြှနျတျောတို့ ပြျောရှငျနပေါတယျ၊လာမယျ့ပှဲကို အကောငျးဆုံး ကစားနိုငျ ဖို့ အာရုံစိုကျမယျ၊ဒါပါပဲ၊ ကြှနျတျောတို့မှာ လကျကနျြ ၂ ပှဲ အဖွဈ နယူး၊ဝုလျတို့နဲ့ ကစားရပါမယျ၊ အရမျးခကျမယျ့ ပှဲတှေ ဖွဈလာမှာပါ၊ ဒါက ကြှနျတျောတို့ သမိုငျးဖွဈလာမှာပါ၊မနျစီးတီးကို စောငျ့ ကွညျ့နဖေို့ မလိုပါဘူး။” လို့ ကလော့ပျက Express ကို ပွောသှားခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။လကျရှိမှာ လီဗာပူးနဲ့ ဘာစီလိုနာ ၂ သငျးထဲက တဈသငျးက ခနျြပီယံလိဂျ ဗိုလျလုပှဲ တကျလှမျးနိုငျခဲ့ရငျ ခနျြပီယံ ဖွဈဖို့ ဦးစားပေး သတျ မှတျ ခံထားရတဲ့ အသငျးတှေ ဖွဈပါတယျ။လီဗာပူး နညျးပွ ကလော့ပျကတော့ ယခငျ ဒေါ့မှနျမှာ နခေဲ့စဉျကတညျးက ဥရောပနဲ့ ပွညျတှငျး လိဂျပွိုငျပှဲတှေ မှာ အမွဲတမျး ဒုတိယနရောနဲ့သာ ကနြေပျခဲ့ရသူဖွဈပါတယျ။ဒီကွားထဲမှာတော့ မနျစီးတီးနညျးပွ ဂှါဒီယိုလာက ကလော့ပျ ရဲ့ စိတျဓာတျစဈဆငျရေးကို ဂရုစိုကျသှားမှာ မ ဟုတျဘူးလို့လညျး ပွောထားတာ ရှိပါတယျ။လီဗာပူးနဲ့ မနျစီးတီးတို့က ပွညျတှငျးလိဂျမှာ ရမှတျ ၁ မှတျသာ ကှာဟနတေဲ့ အနအေထားမှာ မနျစီးတီးက အဆငျ့ ၁နရောကနေ ဦးဆောငျနတော ဖွဈပါတယျ။
ဒီဂီယာကို ဘောလုံးလောက နဲ့ ခေတ္တအဝေးမှာနေဖို့ ဂယ်ရီနဗီးလ် တိုက်တွန်းပြောကြား
ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲမှာ လီဗာပူးလ် တို့ အသာရနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်း
လာမယ့်ရာသီမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရမယ်လို့ယုံကြည်နေတဲ့ အာဆင်နယ် ဂိုးသမား ဘန်းလီနို